Gaaffiin saba keenyaa tukkummaa dhabuu moo Bilisummaa dhabuudha?
Waa’een tokkummaa kun yeroo hedduu dubbatama. Garuu, waa’een tokkummaa kun hawaasa Oromoo biratti akkamalee dhimmi itta bahamaa jira. Tokkummaan kun hiika bal’aa fi addaddaa qaba. Akka qabsootti, fakkeenyaaf, yaadni tokkummaa jedhu kun humna ofii walitti qindeeffatanii kallattii tokkoon kaayyoo ofii milkeessuu irratti hojjachuu dha. Haalli kun garuu galii fi kaayyoo akeekame waliin kan walqabateedha. Kun immoo irratti hojjatamaa jira. WBOn hidhatee kan lolu Bilisummaa saba keenyaaf; weellistooti keenya aadaa fi aartii saba keenyaa kan gara Bilisummaatti nu jabeessu hojjachaa jiru; barsiisaan Qubee Afaan Oromoo barsiisuun dhaloota guddisaa jira. Miidiyaanis bakka jirutti odeeffannoo dhimma saba keenyaa irratti fuulleffatee dhiyeessaa jira. Egaa, tokkummaa kan jedhamu, namuu beekumsaa fi ogummaa qabuun dantaa sabaa irratti karaa dandanda’een hojjachuu fi hirmaachuu ilaallata jechuudha.
Amma rakkoon saba keenyaa, Tokkummaa dhabuu dha moo Bilisummaa dhabuudha?
Rakkoon saba keenyaa hedduu dha. Sabni keenya rakkoolee dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa hedduu fi walxaxoo taán qaba. Rakkooleen kunneen garuu walkeessa waan jiraniif, duraa duubaan hiikaman malee siá tokkotti furamuu hin danda’an; kaan xiyyeeffannoo dursaa argatuu qaban; kaan immoo yeroof kan turfaman ta’u.
Sabni garbummaa keessa jiraatu, yoo biyya hin qabaatiin, dinagdeenis, beekumsaanis, ogummaanis, qabeenyaanis kan warra humnaan isaan bituu ti. Kanaaf, gaaffiilee Oromoo keessaa kan dursee hiikamuu fi fala argachuu qabu, dhibdee garbummaa ta’a.
Rakkoon siyaasaa yoo furmaata hin argatiin, rakkoolee kaan hiikuu fi furuun rakkisaa dha.
Yeroo amma waltajjii mara irratti kan namuu hasa’uu fi amma amma immooa aadaa fakkaachaa dhufe, dhibdee tokkummaa fi hoggansaa ti. Rakkoon kun hin jiru jechuun nama rakkisa. Garuu, rakkoo guddaa ta’uu hin dandaú. Rakkoon keenya guddaan Bilisummaa dhabuu dha. Namuu kana sirnaan yoo hubate, rakkoon keenyaa “tokkummaa dhabuu dha,” jedhamee waanti haasa’amu, gaaffii saba keenyaa gara dabarsuuf kan uumameedha.
Yeroo maraaf fala tokko akeekuun sirrii hin ta’u. Rakkooleen Oromoo rakkoolee hedduu walxaxaa fi bal’aa dha. Rakkooleen kunneen falawwan hedduu barbaadu. Kaan isaanii kan qawween furamaniidha. Kaan immoo kan dinagdeen irra aanamuu dha. Kan biroo, beekumsaa fi ogummaa kan barbaaduudha. Haala akkasii keessatti waanti godhamuu qabu, rakkooleen tarreessuu otuu hin taane, rakkooleef furmaata waliif akeekaa dha; furmaata dhiyaates hojiinis mul’isuu dha.
Kanaaf, amma kan sabni keenya dhabee jiru tokkukmmaa miti. Tokkummaan, yeroo mara numa harka jira. Sabni keenya kan dhabee jiru bilisummaadha; sabni keenya garbummaa jala jira. Garbummaa keessaa bahuuf immoo hojiin hojjannu marti kan bu’aa buusu, kan gara kaayyoo keenya guddaatti nu geessu ta’uu qaba. Hojiin keenya marti, kan ummata keenya humneessuu fi guyyaa biliusmmaa dhiyeessu ta’uu qaba. Sabni keenya kan dhabee jiruu fi argachuu qabus, Bilisummaa dhabuudha!!